Kukwanisa kubudisa, kugadzira uye kugadzira zvakawanda zve 4-Chloro-1h-pyrrolo [2,3-b] pyridine-3-carbaldehyde (918515-16-9) nehutano hwehutsika pasi peCGMP
Janus kinases (JAKs) inotora basa rinokosha mukushandurwa kwechiratidzo chinonzi medito. JAK inhibitors yakabuda semagadzirirwo emakonomodulative mazhenesti ekudzivirira kwekudzikwa kwekuisa. Takave takazivisa kuti tricyclic imidazo-pyrrolopyridinone 2 inonyanya kukosha JAK inhibitor; zvisinei, zvakange zvisingatauri zvakanzwika pamusana pekudzivirira membrane kukwana. Pano, tinoshuma kugadziridza kwechimiro chekombani 2 mu tricyclic dipyrrolopyridine 18a inotarisa kuderedzwa kwenzvimbo yePolar surface (PSA), iyo inoratidzira basa rakanyanya mu vitro, yakagadziridzwa membrane kugadziriswa uye zvakanaka bioavailability. Chigadzirwa 18a chakaratidza kubudirira muhutachi heterotopic mwoyo kuchinja mafomu.
MDL Nhamba MFCD09880129
Kemikari Zita kana Nyaya 4-Chloro-1h-pyrrolo [2,3-b] pyridine-3-carbaldehyde
Physical Form Muchena kusvika mavara akaoma
SMILES ClC1 (= C2 (C (= NC = C1) NC = C2C = O))
Boiling Point 372.6 ° C pa 760 mmHg
4-Chloro-1h-pyrrolo [2,3-b] pyridine-3-carbaldehyde (918515-16-9) Kuchengetedza uye Kugadzirisa
Usafema guruva kana kupisa.
Iva nekuchengeteka kushambidza uye kushambidza kweziso kuwanikwa.
Usasvike mumaziso, paganda kana panguvo.
Chengetedza chigadziko chakanyatsovharwa.
Chengetedza munzvimbo yakachena, yakaoma, ine zvakanaka.
Iva nechokwadi chekuti mudzimu wakakwana unoshandiswa.
Shandisa chete mumakemikari fume hood.
Kuwana tricyclic dipyrrolopyridine zvigadzirwa semutsva JAK inhibitors
Janus kinases (JAKs) inotora basa rinokosha mukushandurwa kwechiratidzo chinonzi medito. JAK inhibitors yakabuda semagadzirirwo emakonomodulative mazhenesti ekudzivirira kwekudzikwa kwekuisa.
Bioorganic uye Medicine Chemistry 2017
Synthesis uye biological test of pyrrolo [2,3-b] pyridine yakafanana sevanopesana nemaitiro uye kushamwaridzana kwavo nemhuru yemusmus DNA
Tsamba ye makumi matatu nemaviri pyrrolo inoverengeka [2,3-b] pyridine yakafanana yakagadzirwa, inozivikanwa (1H NMR, 13C NMR uye MS) uye yerototoxic kuongororwa kwemaserolekisi akaitwa pamusoro peboka revanhu vatatu chemasero emasero evanhu anosanganisira A549
4-Chloro-1h-pyrrolo [2,3-b] pyridine-3-carbaldehyde (918515-16-9) Kurayira Kuwanda uye Mutengo:
Tet-Butyl N- (2-bromoethyl) carbamate (39684-80-5)